» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १२
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १२
७ बैशाख २०७७, आईतवार ०६:०२
मकवानपुर, ७ बैशाख । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ अहिले चर्चामा छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शोको चितवन अडिसनबाट १३ प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको बाह्रौँ भागमा चितवन अडिसनबाट छानिएका अन्तिम ४ जना प्रतियोगीहरु लक्ष्मण महतो, सन्दिप प्रधान, मोहन केसी र चन्द्रबहादुर पुनका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
१३) चन्द्रबहादुर पुन– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि चितवनबाट छानिएका तेह्रौँ प्रतियोगी हुन् चन्द्रबहादुर पुन् । उनी यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागी भएका थिए । उनले अडिसनमा ‘बाबुको जुंगो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो चरणका लागि छानिएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।